आठ कक्षा पढ्दा नै आठ पेजको लभ लेटर दियो – दीपिका - अन्तरवार्ता - साप्ताहिक
तस्विर : महेश प्रधान
आठ कक्षा पढ्दा नै आठ पेजको लभ लेटर दियो – दीपिका
भाद्र १०, २०७६
दीपिका प्रसाईं नेपालकी लोकप्रिय अभिनेत्री हुन् । चलचित्र ऐश्वर्यबाट एकाएक धेरैको दिवाना बनेकी दीपिकाले त्यसपछि छक्कापन्जा ३ बाट धेरैको नजरमा पनि परिन् । यो चलचित्रपछि उनले आफ्नै होमप्रोडक्सनबाट निर्माण हुने चलचित्रमा काम गर्ने अडान राखेकी थिइन्, तर उनले बिचमा चलचित्र हेल्लो जिन्दगीमा काम गरिन् । उनै दीपिकासँग रामजी ज्ञवालीले यसपटक रमाइलो गफ गरेका छन् ।
डियर जिन्दगीको सुटिङ त सकियो, अहिले के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
अहिले म नयाँ प्रोजेक्टको तयारीमा छु ।
कस्तो प्रोजेक्ट हो ?
यो होम प्रोडक्सनको ब्यानरमै निर्माण हुने चलचित्र हो । निर्देशक दिवाकर भट्टराई र मेरो आफ्नै ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको चलचित्र हो ।
कहिलेदेखि छायांकनमा जानुहुन्छ ?
दशैं मनाएर छायांकनमा जाने तयारीमा छौं ।
अनि, पारिवारिक दाम्पत्य जिवन कस्तो चल्दैछ ?
राम्रै छ ।
चलचित्र क्षेत्रमा अभिनेत्रीको रुपमा करिअर जम्न लागेका बेला दिवाकर भट्टराईसँग भेट भयो है ?
संयोग नै भन्नुपर्छ । भनिन्छ नि, हरेक कुरा समयको खेलसँगै परिवर्तन हुन्छ । समयको रफ्तारसँगै मानिसले भोग्नुपर्ने कुरा भोग्दै जानुपर्छ ।
बास्तवमा उहाँको के कुराले प्रभावित पा¥यो ?
एउटै कुराले प्रभावित पारेको होइन । उहाँको व्यवहार, स्वभाव, लुक्स लगायत धेरै कुराले प्रभावित पार्दै लग्यो ।
पहिलोपटक उहाँसंग कहाँ भेट भएको थियो ?
बानेश्वरको एउटा कफि सपमा नि ।
कतिबेर भुल्नुभयो ?
केहि घण्टा ।
दिवाकर भन्दा अघि कसैसँग विहे हुनेवाला थियो ?
थिएन । तर, हात माग्न त धेरै जना आएका थिए ।
दिवाकर जि ले दिएको पहिलो गिफ्ट के थियो ?
ब्याग थियो ।
ब्याग भित्र के थियो ?
खाली थियो ।
मेरो मन पछि ब्याग जस्तै खाली छ, भरिदिनु भन्नुभएको रैछ है ?
हा हा हा..., त्यस्तै रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्यो ।
अलिकति भिन्न विषयमा कुरा गरौं, कुनैपनि पुरुष पहिलोपटक भेटियो भने तपाईंको आँखा कहाँ जान्छ ?
उसको लुक्समै हो ।
उसको व्यवहार हेरेर संगत गर्छु ।
कस्तो पुरुषले तपाईलाई आकर्षित गर्छ ?
साधारण स्वभाव भएको व्यक्ति मन पर्छ । बनावटी स्वभाव देखाउने मान्छेदेखि मलाई टाढै बस्न मनपर्छ ।
बनावटी स्वभाव देखाउने व्यक्ति डरलाग्दा हुन्छन् ।
जिवनमा पहिलोपटक कुन पुरुषलाई भेट्नुभयो ?
मेरो आफ्नै ड्याडीलाई ।
बुबाले कत्तिको मायाँ गर्नुहुन्थ्यो ?
एकदमै धेरै ।
कहिल्यै पिट्नुभएको याद छ ?
सानोमा सबैभन्दा धेरै झगडा कोसँग गर्नुभयो ?
मेरो सानो भाईसँग हो । बिहान देखि साँझसम्म निकै झगडा हुन्थ्यो ।
कस्तो पुरुषदेखि असाध्यै घृणा लाग्छ ?
नेगेटिभ एटिच्युड भएको पुरुष पटक्कै मन पर्दैन ।
कस्तो मान्छेदेखि तपाईलाई सवैभन्दा धेरै झर्को लाग्छ ?
मिसकल गरिरहनेदेखि दिक्कै नै लाग्छ ।
त्यस्ता ब्यक्तिलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?
कहिलेकाहीँ त मैले मज्जाले थर्काएकी छु । कहिलेकाहिँ सम्झाएकी पनि छु ।
दिवाकर जि भन्दा अघि कोही प्रेमी थिए की ?
म सिंगल नै थिएँ ।
जिन्दगीमा पहिलोपटक डेट गएको याद छ ?
याद हुनका लागी त प्रेमी हुनुपथ्र्यो होला नि । म करिअर बनाउन हिंडेको मान्छे, डेट–सेटमा भुलिनँ ।
करिअरको सुरुवात्मै प्रेममा पर्नुभयो हैन ?
हाहा.., यो अनौठो संयोग हो । भाग्यमा जे लेखिएको हुन्छ, त्यो भोग्नै पर्दोरहेछ । लभ मात्रै परेन, उहाँसंग त विहेनै भयो ।
निकै राम्री हुनुहुन्छ, पहिलो पटक कहिले लभ लेटर हात पर्यो ?
८ कक्षामा पढ्दा नै हो ।
प्रेम पत्र हात परेपछि कस्तो लाग्यो ?
एकदम डर लाग्यो ।
लभ लेटर कस्तो थियो ?
झण्डैं ८ पेजको थियो । कागजको कुनैपनि खाली स्थान बाँकी नराखेर, निकै इमोशनल कुरा लेख्नुभएको थियो ।
के लेखिएको थियो ?
मिठा सपना कोर्नु भएको थियो । जुन सपना सँगै पुरा गरौं भन्नुभएको थियो । साथै, उहाँले आफुले असाध्यै माया गर्ने कुरा भन्नुभएको थियो ।
जवाफ के दिनुभयो त ?
एसेप्ट गर्ने माहौल नै भएन । म परिपक्क थिइनँ । प्रेम भन्ने कुरा के हो भन्ने समेत ख्याल नभएको मान्छेले कसरी लभ एसेप्ट गर्छ होला !
जिवनमा पहिलोपटक कस्ले चुम्वन गरेको थियो ?
विहे त भयो, तर कोही क्रस छ ?
शाहिद कपुर । मैले कविर सिंह हेरिसकेपछि त शाहिदको डाइहार्ड फ्यान भएँ । खासमा शाहिदले मेरो दिल चोरे ।
तपाईको नामको ट्याटु कसैले खोपेको छ ?
मेरो नामको ट्याटु भन्दा पनि मलाई पाउने आशामा एकजना पुरुषले हात काटेर मेरो नाम लेख्नुभएको याद छ ।
आफ्नो बनाउन खोज्ने कसैले धम्की दिएको याद छ ?
एकजनाले धम्की दिनुभएको थियो । बास्तवमा, प्रेम भन्ने कुरा कोसँग कसरी पर्छ भन्नेनै थाहा हुँदैन रहेछ ।
संसारको सबैभन्दा ह्याण्डसम पुरुष ?
ड्याडी होला ।
तपाईलाई सवैभन्दा धेरै मनपर्ने नेपालमा कोही नेता छन् ?
केपी शर्मा ओली ।
उहाँको के कुरा मन पर्छ ?
उहाँ अहिलेको कुरा होइन, भविष्य हेरेर काम गर्नुहुन्छ । खासमा उहाँजस्तै केहि नेता हुनेहो भने नेपाल चाँडै समृद्ध हुने थियो ।
अलिकति मुडी स्वभावकी हुनुहुन्छ रे, जिवनमा कसैलाई पिटेको याद छ ?
सानोमा भाईसँग झगडा हुन्थ्यो, उसैलाई खुव कुटेको छु ।
स्कुल पढ्दा तपाईको झापड खाने पनि होलान् नि ?
कक्षा १० मा पढ्दा एकजना साथिलाई मज्जाले झापड हान्या छु । असाध्यै नराम्रो व्यवहारका कारण उसलाई पिट्नै पर्ने हुनाले पिटेकी हुँ ।
झगडा कसले मिलायो ?
टिचर आएर मिलाउनुभयो ।
प्रकाशित :भाद्र १०, २०७६
रियल जोडीको कस्तो लाग्यो यो गेटअप ?
यस्तो छ राजश्री फिल्म्सको नाम कहानी
दीपिका पादुकोण गइन रोशन क्याम्पमा
बलिउडका स्टन्ट वुमन
जोगीको कपडामा ढोंगीहरू धेरै छन् माघ २१, २०७६
‘एनआरएन कसैको स्वार्थपूर्तिको भर्‍याङ हुन सक्दैन’ माघ १९, २०७६
मिडियाको हौसला बढाउने जिम्मेवारी राज्यकै हो माघ १५, २०७६
अब वलिउड र साउथले हाम्रो एक्सन कपी गर्नेछ : विराज भट्ट माघ ११, २०७६
‘पारिजातले मेरो कथाको प्रशंसा गर्नुभएको थियो’ पुस २६, २०७६
‘भावनात्मक बन्डिङ हुनुपर्छ’ पुस २१, २०७६